Prostar hwakagadzwa muna 1998, unyanzvi pamasikiro uye kugadzirwa yepamusoro OEM uye Prostar pachake muchiso kuti maindasitiri Uninterruptible Power Supply (Ups), Power Inverter, Solar ukomba, Solar Power Zera maitiro uye Wind Power rudzi hurongwa, uye Emergency Power Supply ( EPS) uyewo yokuzvigadzirisa isina kutungamirira asidhi bhatiri. Prostar ane ruzivo chaizvo uye nyanzvi Design uye Research Department dzinoshanda pamwe vatengi kwavo chigadzirwa kukura uyewo mazano nokusingaperi kuwedzera Prostar muchiso siyana. Other mapoka inosanganisira Quality Control Center, Rezvokutenga & Production Center, uye Sales uye Customer Service Centre.Prostar munongova anokonzera mabhizimisi kusimudzirwa uye basa iri Mainland China. Kuburikidza gumi kuedza kukuru, Prostar akaita posita vakapiswa akatevedzana magetsi uye mabhatiri zvikuru kushandiswa muminda mari, Telecom, Magetsi, peturu kemisitiri, mari uye mitero kuna China, uye tanga norukudzo akataura nevatengi. Achitora uye kuita nyika-kirasi zvinhu pamwe nenyanzvi wose mafungiro sezvo ayo basa, Prostar achingoramba kugara tichidzidza uye utsanzi kuedza kukwira kukwirira mutsva basa. We muchizvikudza kuomerera nomudzimu "Kuvimbisika, Cooperation, makwikwi zvinhu uye".
Full-siyana simba zvigadzirwa nemushonga, kupa mumwe-chemabhazi kutengwa.
Professional okutengesa chikwata, kupa munhu zvichienderana uye zvakatsaurirwa mabasa.
Prostar ndiye aitungamirira mugadziri uye ekisipota pamusoro Ups, Inverter, Solar module uye Battery. Our mazhinji uye nounyanzvi ano, zvakakwana kugadzirwa mitsetse, ruzivo mudonzvo uye kunyatsoomerera yemakambani gadziriro nechokwadi zvigadzirwa unhu hwedu. We Kuzvikudza nekuzvitaurira unhu zvigadzirwa, basa uye Pricing, uye vanodavira kuti vatatu ...
Prostar chinosiyanisa waibva vamwe simba boka maererano zvinoshamisa nemigumisiro nayo anovanunura. kwaniso yedu kwava nezvibereko izvi anowana kubva yedu yakasiyana wemishonga zvinotevera zvakanakira: Unmatched ruzivo uye unyanzvi, Proprietary benchmarks, zvakanakisisa-tsika methodologies, uye basa ...
Ungave asunga kwako digitized mapikicha mhuri iri rimwe musha PC, kana mamiriyoni emadhora rwebasa-yakaoma mashoko kana midziyo yenyu mamiriro-of-nounyanzvi Server kambani, Prostar ane Itariro kugadzirisa. Prostar atova anotipa kuchengeteka uye rugare-of-pfungwa kumamiriyoni vanoshandisa sezvo yose mutungamiri musimba kudzivirira ...
Kuronga usingabhadhari simba kukwanisa odhita uye Prostar Power mazvikokota achava kufungidzira simba zvaunoda, kuona zvinogona dambudziko nzvimbo uye varumbidze mari-anobudirira mhinduro. Chii uchafarirwa.: A roadmap pamwe Design tradeoffs akatsanangura; Detailed chirongwa zvinodiwa, BOMs uye nokurondedzerwa; Yakadereresa kutora mutengo chipi ...
Prostar gadzira uye ekisipoti nokuda yakanakisisa mitengo pamwe yepamusoro uye yakaderera mutengo Ups, Inverter, Storage Batteries, Solar ukomba uye Solar Power System kwemakore akawanda.
20KVA-210KVA Modular kupota
1-3KVA High Frequency Rack kupota
10-20KVA High Frequency Rack Ups (3: 1)
3KW-10KW Mbeu dzakauchikwa Solar Inverter
Prostar 3KW kure afoot rezuva enyika kuti musha wako
Prostar inokwanisika 4kw nyika dzose dzinotenderera zuva ne Vachirova ...
Prostar 5kw nyika dzose dzinotenderera zuva ne bhatiri negadziriro yeparutivi fo ...
Prostar 4000w kure afoot renzou goho kuti ...
Prostar 2kw nyika dzose dzinotenderera zuva ne mabhatiri kuti musha
Prostar 3000w musha nyika dzose dzinotenderera zuva ne okuchengetera sq ...
Prostar 1200w kure afoot photovoltaic nehurongwa
Prostar 600 watt kure afoot renzou
Prostar kure afoot renzou 300W
Video Pfupiso yebhuku
Prostar 50KVA Ups kushandisirwa Malaysia Manufacturing ...
Prostar 30KVA Ups kushandisirwa Vietnam Manufacturing ...
Prostar 300KVA Ups kushandisirwa Nigeria Paper Towel F ...
Prostar 80KVA Ups kushandisirwa Hong Kong Internationa ...
Prostar ari nyanzvi Ups Solution Provider & Energy Expert mu China.
[Kuonana-fomu-7 404 "Yashaikwa"]
Nemateru yave kuiswa muna 2015, uye zviri kushanda zvakanaka saka kure, unhu ndiyo yakanaka. Saka ndinofunga Prostar yakavimbika munoitika mugadziri uye mutengesi. Hazvina akanaka ruzivo kuti pamwe Prostar.
Prostar Low maitikiro maindasitiri Ups zvikuru zvakanaka kudzivirira yedu compressor michina.
Uye nguva dzose Prostar ave akakotama pamusoro shure kuti zvinodiwa staffing zvinodiwa angu, zvechokwadi vane nzvimbo mutengesi kuti kambani yangu.
Mr. Latoya Zainale Senior Engineer
Prostar Ups akasarudzwa nokuda professionalism uye kukwanisa kupa zvakanaka unhu zvigadzirwa, uye akagutsa pashure-okutengesa basa. Prostar ane akakoshesa kudyidzana kuti ticharamba pamwe navo ramangwana.
Prostar zvinombooma munogara ruzivo, nyanzvi uye zvinodiwa kuti zvakumbirwa. Nokuti kare 5years ivo partnered pamwe vekwedu, ndinogona kupindura pamusoro Prostar akaigadzira kupota nechivimbo.
Mr. Callum Wood General Manager
fekitari wangu inoshandiswa Prostar Ups pamusoro 5years kusvikira zvino. Uye isu sarudza Protar kuva kwedu nguva cooperator refu nekuti vane wako nokukurumidza zvikuru ikarumbidzwa uye kuita kuti vatengi, uye ivo kuita basa guru kubudisa kupota vane unhu hwakanaka kwazvo uye mutengo pamwe. Yose zvayo, ndiri kufara zvikuru ukama uye basa pamwe Prostar.
Mr. Chukwuemeka Okpara Direct Manager
Prostar yangu rakavimbika mabhizimisi naye. hwakanaka uye yakakwirira kunyatsoshanda rezuva Panel pamwe nemakwikwi mutengo inoita basa redu kukura nokukurumidza
Prostar aigona kupa rakazara renzou mhinduro. Ndakatenga imwe 40kw kure afoot renzou muna 2012, zviri kushanda zvakakwana kusvikira ikozvino. We kufanana zvigadzirwa Prostar vake.
Mr.Arif Mirza General Manager
Ivo akatiratidza rakaisvonaka rezuva PV dzaFord yashanya. The chirimwa zuva muchitokisi nokuveza, nomoto gungano, module laminator zvakazara zvoga kugadzirwa dzakakwirira yauinayo. Unhu kunovhenekwa uye kuongorora zviri zvakaoma chaizvo.
Mr. Md.Akram Mukanganise General Manager